Hiob 37 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
37 “Ampa ara, me koma popo eyi ho,+Na ehuruhuruw fi faako a ɛwɔ. 2 Monyɛ aso ntie ne nne mmobom,+Ne kurududu a epue fi n’anom no. 3 Ogyaa mu wɔ ɔsoro nyinaa ase,Na n’anyinam+ kodu asase ano nohoa. 4 Ɛno akyi na wɔte mmobom kɛse;Ɔde ne kɛseyɛ+ nne kasa ma aprannaa bobom,+Sɛ wɔte ne nne no nso a, ensianka wɔn.+ 5 Onyankopɔn ma ne nne+ so ma aprannaa bobom anwonwakwan so,Na ɔyɛ nneɛma akɛse a yentumi nte ase.+ 6 Ɔka kyerɛ sukyerɛmma sɛ, ‘Tɔ gu asase so,’+Na ɔka saa kyerɛ osu, ɔno ara ne sutɔ kɛse no.+ 7 Ɔkyekyere ɔdesani biara nsa,Na ɛma onipa desani biara hu ne nsa ano adwuma. 8 Afei wuram mmoa kɔtɛw,Na wɔkɔ wɔn ahintawee.+ 9 Mframa bɔ fi nea efi ba,+Na atifi mframa ma awɔw ba.+ 10 Onyankopɔn home na ɛma nsukyenee,+Na ɛka nsu hyɛ.+ 11 Nsu na ɔde soa omununkum,Ne hann+ hwete omununkum, 12 Ɛdannan sɛnea ɔkyerɛ no kwan, na ɛyɛ ne nnwumaWɔ baabiara a ɔhyɛ+ no wɔ asase so. 13 Sɛ ɔde yɛ abaa+ oo, ɔde yɛ n’asase yiye+ oo,Sɛ adɔe+ oo, ɔma edi dwuma bi. 14 O Hiob, yɛ aso tie eyi;Gyina hɔ komm, na dwinnwen Onyankopɔn anwonwadwuma ho.+ 15 Wunim bere a Onyankopɔn de wɔn nnwuma hyehyɛɛ wɔn nsa?+Na wunim bere a ɔmaa ne mununkum mu hann hyerɛnee? 16 So wunim sɛnea omununkum sɛn hɔ,+Nea owie pɛyɛ wɔ nimdeɛ mu no anwonwadwuma no?+ 17 Wunim sɛnea wo ntade mu yɛ hyewBere a asase so yɛ dinn fi anafo fam no?+ 18 Wubetumi ne no atrɛw ɔsoro mu+Sɛnea wɔboro agude dennen de yɛ ahwehwɛ no? 19 Ma yenhu nea ɛfata sɛ yɛka kyerɛ no;Esum nti, yɛrennya nsɛm nka. 20 Metumi aka akyerɛ no sɛ mewɔ asɛm ka anaa?Anaasɛ onipa bi aka biribi a ɛsɛ sɛ wɔbɔ no amanneɛ?+ 21 Nnipa de, wonhu hann;Gye sɛ ewim hyerɛn,Bere a mframa abɔ ama wim atew no. 22 Atifi fam na sika fɛfɛ fi ba.Onyankopɔn anuonyam+ yɛ hu. 23 Ade nyinaa so Tumfoɔ no de, yennya nhuu no yiye;+Ne tumi korɔn,+Na atɛntrenee+ ne adetrenee+ dodow de, ɔremmu no ade ketewa.+ 24 Ɛno nti, momma nnipa nsuro no.+Ommu onipa biara a ɔyɛ onyansafo n’ankasa ne komam.”+